Iwo ekutanga mabhenji eiyo iPhone 7 Plus anoonekwa | IPhone nhau
Nyowani (nyepera) iPhone 7 Plus mabhenji anoonekwa: anosvika 48% nekukurumidza kupfuura iPhone 6s
Pachine mwedzi kuti uende iPhone 7 uye iPhone 7 Plus zvisati zvaratidzwa, asi zvinoita sekunge nguva yacho painosvika, hapazove nekushamisika kuzoburitswa. Iyo dhizaini, iyo nyowani ruvara, akawanda maratidziro uye ikozvino zvakare iwo akabuditswa matsva mabhenji eiyo iPhone 7 Plus. Kana iwe usingazive, iwo mabhenji ndiwo mabvunzo ekuita emidziyo ine anoshanda system.
Mufananidzo unotevera, wakatumirwa paChinese foramu Feng.com uye nhonga neDutch webhusaiti Techtastic.nl, inoratidza mhedzisiro ye iPhone yakanzi iPhone9,2 iyo ine 64GHz 2.37-bit processor uye 3GB ye RAM. Kana tikatarisa kuti iyo iPhone 6s Plus inoonekwa muGeekbench se iPhone8,2, kana kubatwa uku kuri kwechokwadi, tinenge takatarisana ne kuita bvunzo yakagadzirwa kune iPhone 7 Plus muna Chikumi 28.
IPhone 7 Plus mabhenji anoratidza kuti ichave iine 3GB ye RAM
Zvekuenzanisa, uye chero bedzi mhedzisiro iyi iri yechokwadi, iyo iPhone 6s Plus yakawana mhedzisiro ye2490 mune imwechete-yepakati bvunzo uye 4341 mune yakawanda-yepamoyo bvunzo. Kana tikatarisa kuti iyi inofungidzirwa kuti iPhone 7 Plus inowana 3548 uye 6430 zvichiteerana, isu tiri kutaura nezve a 42-48% yakakwira simba kune iyo ye iPhone 6s. Hazvishamise kuti iyi iPhone 7 Plus yaizodarika simba reiyo 12.9-inch iPad Pro, chishandiso chinowana mamakisi e3224 uye 5466 zvakateedzana mumuyedzo weGeekbench.
Pakupedzisira july 15 akaonekwa mamwe mabhenji ekuti iyo iPhone 7 ingangove 18% nekukurumidza kupfuura iyo iPhone 6s. Apple kazhinji kuita kaviri yemidziyo yavo chete gore mushure mekutanga kwemhando yapfuura, saka mhedzisiro yacho yakanga yakaipa zvakashata. Panguva iyoyo zvaifungidzirwa kuti mhedzisiro iyi ichave kubva kumuenzaniso uye kuti vachakurumidza kupfuurwa nemamwe mabhenji, sezvakaitika kune izvo zvakaburitswa maawa mashoma apfuura.
Unofungei? Iwe unofunga kuti mhedzisiro iyi ndeyechokwadi here?
UPDATE: Mutungamiri mukuru wePrimate Labs atozvitaura kuti mhedzisiro manyepo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Nyowani (nyepera) iPhone 7 Plus mabhenji anoonekwa: anosvika 48% nekukurumidza kupfuura iPhone 6s
Ini ndinofunga ndiri kugadzirira iyo portfolio ...
nenzira yandinofunga kuti iyi modhi neiyi dhizaini isarudzo yakanaka kutenga sezvo iyo iPhone 6 yakauya nemagadzirirwo zvikanganiso nezvimwe, ndeipi imwe yakabwinyiswa iPhone ingave iripo pane iyi yanga iine yakafanana dhizaini kwemakore matatu? rimwe regore rinouya richauya nekutadza kwakawanda, ikoko ndinozvisiira kune avo vanotaura nezvekumirira rinotevera.
Pindura kune OMG
Pedro Castillo akadaro
Mhoro, semunhu anoshandisa IPhone 6s Plus ini ndatozvigadzirira kuti ndichinje iyo yemuchina wemuchina uyo watove kutenderera kona, Iyo IPhone 7plus, ndatenda
Pindura Pedro Castillo
Gabriel Eduardo Ortega chinobata mufananidzo akadaro
Ndiri kuona kuti mune zvakatemwa zvinoti memory 2932mb ndinoreva 3gb ye RAM !!!! Kana ichi chiri chokwadi, zvinosimbiswa kuti zvirinani iyo yekuwedzera ichauya ne3gb ye RAM! Zvakanaka
Pindura kuna Gabriel Eduardo Ortega
Phil Leotard akadaro
Zvinoitika kuti iwo mabhenji mabhenefiti http://www.macrumors.com/2016/08/09/iphone-7-plus-geekbench-results-reveal-a10-3gb-ram/
Pindura kuna Phil Leotardo